Isethaphu futhi-VPN ukwesekwa ku BlackBerry (amasevisi ID, BBM, World, Vikela) — Everything for BlackBerry. InfoResheniya
Isethaphu futhi-VPN ukwesekwa ku BlackBerry (amasevisi ID, BBM, World, Vikela)
Ngemva Izilungiselelo ze-VPN ku BlackBerry, kudivayisi angaphandle IP-ikheli okuzokhishwa, futhi idivayisi izonqunywa sengathi kwelinye izwe. izinzuzo eziningi — ukufinyelela amasevisi BlackBerry, efana ID, Umhlaba, Vikela, BBM; ukubethela oqinile konke okuhamba, ngisho Wi-Fi yomphakathi-amanethiwekhi; Ukuzifihla ephelele. Ngaphezu kwalokho BlackBerry amadivayisi, i-VPN yethu ingasetshenziswa Android ne-iOS for BBM-isithunywa. Oda elincane — izinyanga 6.
Price of Isethaphu futhi-VPN ukwesekwa ku BlackBerry (amasevisi ID, BBM, World, Vikela) service for your BlackBerry model
Ingabe ufuna ukufinyelela kuwo wonke amasevisi BlackBerry? ukubethela Strong konke okuhamba? Kwamagama?
Uyini-VPN futhi kungani uludinga
VPN (Eng. Virtual Private Network — isengezo senethiwekhi ezimele) — ubuchwepheshe eyenza ukuxhumeka kwenethiwekhi okuvikelekile (inethiwekhi okunengqondo) phezu kwenye inethiwekhi (-Wi-Fi, MTS ephathekayo, MegaFon, Beeline, Tele2, T-Mobile, Verizon, Vodafone, noma iyiphi enye uxhumano). Naphezu kweqiniso lokuthi ukuxhumana abazenzi phezu okungavikelekile omphakathi, lizinga ithemba kuze kube okunengqondo inethiwekhi ye-VPN uhlale okusezingeni eliphezulu ngenxa ukusetshenziswa indlela yokubhala efihla incazelo (ukubethela, ubuqiniso, ingqalasizinda ukhiye womphakathi, izindawo ukuze azivikele ukuphindaphinda futhi ushintshe ngocansi phezu okunengqondo ezokuxhumana).
I-VPN, ngokungafani proxy, usebenza nje kuphela ku-Wi-Fi, kodwa futhi kunethiwekhi ka-opharetha. Ngaphezu kwalokho, proxy akususi imikhawulo ukulanda isicelo kwi-World neminye imikhawulo.
ERussia nakwamanye amazwe e-VPN izidingo — BlackBerry nje ukufunda ngakho .
Oda elincane — izinyanga 6.
Ukusetha i-VPN ku BlackBerry 10 futhi Playbook
Ukulungisa VPN, ungasebenzisa ezihlukahlukene-VPN-amasevisi, kodwa bonke, ngaphandle kokukhetha, ziyinkimbinkimbi ukuze usethe, musa ngokukhethekile noma Asisekeli BlackBerry, unganiki ukuxhumana okuthembekile.
Sikunikeza isixazululo kwezifiso BlackBerry. Ukuvumela-VPN zethu BlackBerry:
Waboshwa ngo ukuhlonza ID BlackBerry, Vikela, namanye amasevisi BlackBerry
Sebenzisa BBM Voice, BBM Isiqophi *
Ukulanda izinhlelo zokusebenza Umhlaba
Ukucinga futhi ukubonisa zokusebenza World, ivaliwe eRussia (BBM) *
Bethela konke womgwaqo, kuhlanganise ukubethela e Wi-Fi yomphakathi-amanethiwekhi
Indawo — Netherlands
ukuxhumana okuthembekile futhi njalo
Ayikho imikhawulo ngevolumu traffic futhi uxhumano isikhathi
* Itholakala kuphela ngesikhathi unqamukile yenethiwekhi, nge-Wi-Fi. Cause: Idivayisi ithumela ulwazi lendawo kusuka opharetha umbhoshongo, ngisho ne uxhumano lwe-VPN.
Ngenxa ukucushwa kude, ungakwazi umyalelo futhi ngokushesha kusebenze isevisi kuphi emhlabeni!
A-VPN imiyalo yokusetha .
Ukusetha i-VPN on iOS kanye Android I-BBM
Abasebenzisi amadivayisi Android ne-iOS (iPhone, iPad, iPod), nathi anikele kwinsizakalo ye-VPN osuselwe, ngaphezu izinzuzo standard, ukunikeza ithuba ukusebenzisa BBM emazweni lapho isithunywa ayitholakali.
Lapho wayala VPN ye-iOS ne-Android ku amazwana abonisa imodeli yedivayisi nenguqulo yesistimu yokusebenza.